I-Ship Sim 2019 yinqwelomoya yokuwela inqanawa kuLwandle lweMeditera | I-Androidsis
Yiza nenqanawa yakho kukhuseleko kwi-Ship Sim 2019 simulator
I-Ship Sim 2019 yinqwelomoya entsha ye-Android apho uya kuba ngumphathi wenye yezo nqanawa zemithwalo zinomtsalane. Umsebenzi wakho uya kuba kukuthwala kugcwele iimpahla okanye nokuba ukhwelise inani elikhulu lamazibuko kuLwandle lweMeditera.
Isihloko se-3D esibonakala kulawulo lwenqanawa, utshintsho lwemozulu olunamandla kunye nokugxila ekuqhubekekeni xa sisondela kwizibuko kwaye kufuneka siyipake. Ukuba kubomi bokwenyani abaphathi "bapake" ngokusebenzisa izixhobo zeGPS, kwiShip Sim 2019 sifumana obona bunzima babo bukhulu kuloo mizuzu inye.
1 Umkhumbi kunye nomthwalo wakho okanye inqanawa yomkhweli
2 Yamkela imishini yorhwebo kwaye uphakamise i-ankile
3 Ngentengiso engenayo
Umkhumbi kunye nomthwalo wakho okanye inqanawa yomkhweli
Olunye lwezona zinto zibalaseleyo kwiShip Sim 2019 kukuba uyakwazi ukuphatha zonke iintlobo zeenqanawa. Oku kukuba ungaya kwenye yezo zinto zithengiswayo, ngaphambi kwe- Itanki leemitha ezingama-400 okanye inqanawa yokuhamba ngenqwelomoya. Into esiyiphosileyo kukuba ezo zikhephe azinabomi buninzi ngaphandle ukuze sikwazi ukubona oomatiloshe okanye abaxhasi abafanayo kuhambo lwethu olukhazimlayo lujonge kumgama ophezu komgaqo.
Ngapha koko, sikunye noShip Sim 2019 ngaphambi komdlalo olungileyo weenqanawa zomdlalo wesikhephe apho sineenqanawa ezilishumi elinambini ukuqala. Enye yeenkcukacha zayo kukuba singahamba Ukutshintsha ipanorama yesikhephe ngokusondeza ngaphakathi okanye ukwenza umqondiso ngasekhohlo okanye ngasekunene.
Kwaye yayo Iiklasi ezi-3 ezahlukeneyo Iinqanawa ziya kwenza umdlalo weqonga utshintshe kancinci. Okubonelela ngamava angcono okudlala kwesihloko esiza kwi-Android ngesiphelo esihle sobugcisa. Ekuqaleni uyakufumana isifundo semizuzu eyi-1 apho unikwe ithuba lokusebenzisa uhlobo lolawulo ukuqhuba isikhephe sakho, ukukhawulezisa kunye nokulahla iankile.
Yamkela imishini yorhwebo kwaye uphakamise i-ankile
Emva koqeqesho, kuya kufuneka ukhethe omnye wemishini ujikeleze uLwandle lweMeditera lonke. Uya kuba nenani eliqingqiweyo lamafutha, ke xa ufika kwindawo oya kuyo, khumbula ukulayisha inqanawa yakho ukuze uqhubeke nomsebenzi wakho.
Umbono kukuba ungumbukeli wemayile nganye yolwandle oza kuhamba nayo kunye nenqanawa yakho, kuba uya kuba nakho ukufumana iimeko zemozulu ezikunyanzela ukuba ujikeleze. Nangona sinokuhlala sihlala tsala isantya esonyukayo ukufika ngokukhawuleza kwindawo esiya kuyo. Ekuphela kwento eyenzekayo yokuba kufuneka sichithe iimali zemali zomdlalo, kwaye uyazi ukuba sithetha ngantoni xa iShip Sim 2019 ngumdlalo we-freemium.
Kukwakho nomjikelo wobusuku basemini, ke jolisa kakuhle kuyo yonke into eyenzekayo xa usiya kwindawo oya kuyo ukuba kunokwenzeka iimpukane. Njengoko ugqibezela uthumo oluthile, unako fumana iinqanawa ezintsha ngayo ukonwaba kunye nobunzima bonyuka. Kancinci kancinci siza kwenza iShip Sim 2019 kunye neembono zepanoramic ezenzeka ngamanye amaxesha kwaye zisigcina sidlala.
Inqanawa Sim 2019 Yinto freemium, ke uya kuba nentengiso ephezulu ngalo lonke ixesha etya kakhulu kumlinganiselo wesikrini. Iyacaphukisa, kwaye khange sikwazi ukuvelisa umfanekiso ukubabonisa umdlalo, kuba kungenjalo ukubanjwa kuya kuba mxinwa. Kukukhubazeka esingathanda ukuba kulungiswe ngandlela thile.
Ngokobuchwephesha kufezekiswe kakuhle, nangona kunjalo sibalekisiwe Kwaye akukho nto yenzekileyo. Ewe, inqanawa yethu yonakele, kodwa akubangakho siphumo okanye nantoni na. Ingathi ungawudla umhlaba kwaye uqhubeke nokuhamba ngenqanawa. Ukuphumla, ukubonakaliswa kwamanzi kuyinyani, imozulu yenziwa kakuhle kunye nemibane enamandla kunye neembono zepanoriki ezithi zenzeke ngamanye amaxesha kwaye zisinike imvakalelo yokuthatha inqanawa yethu kuLwandle lweMeditera.
I-Ship Sim 2019 yinto elungileyo yokuthumela inqanawa onayo simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kwaye oko kuyakwenza uzive ungukapteni wokwenyani wenqanawa enkulu yemithwalo okanye enye yezo zohambo.
Inqanawa Sim 2019
Iindidi ezi-3 zamaphenyane
Ukuhamba ngolwandle ngeMeditera
Umthuthukisi: I-Ovidiu Pop
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Yiza nenqanawa yakho kukhuseleko kwi-Ship Sim 2019 simulator
I-Fancade iphantse ukuqhubeka kweMekorama, nangona kukho ukungafani